Brain to Vehicle Technology ကို CES 2018 မှာချပြမယ့် Nissan! – AutoMyanmar
Las Vegas မှာကျင်းပမယ့် CES 2018 မှာတော့ Nissan အနေနဲ့ Brain to Vehicle (B2V)ဆိုတဲ့ Technology အသစ်ကိုချပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာရောင်းအားအကောင်းဆုံး EV (Electric Vehicle) တွေအပြင် Nissan ရဲ့အနာဂတ်နည်းပညာအချို့ကိုပါဖော်ပြသွားဉီး မှာပါ။
B2V ကတော့ ကားမောင်းသူရဲ့ ဉီးနှောက်ကို Scan ဖတ်တဲ့ Tech ပါ။ ဉီးနှောက်လှိုင်းတွေကို Scan ဖတ်ပြီးတာနဲ့ မောင်းနှင်သူရဲ့ကားမောင်းတဲ့အနေအထားပုံစံတွေကို ခန့်မှန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းနှင်သူပြုလုပ်တဲ့ ကားကိုဘယ်ကွေ့၊ ညာကွေ့၊ အရှိန်မြင့်တာ၊ ဘက်ရိတ်နှင်းတာ အစရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါင်းစုံကို Scan ဖတ်ထားပြီး မောင်းသူ မပြုလုပ်မီ ၀.၂ နဲ့ ၀.၅ စက္ကန့်လောက် စောပြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ B2V Tech ကိုတော့ဉီးခေါင်းမှာ Device တစ်ခုတပ်ဆင် ပြီးမှထိတွေ့ခံစားနိုင်မှာပါ။
B2V ဟာမောင်းသူတွေထက်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်စောပြီး လုပ်သင့်တာကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ့်နည်းပညာဖြစ်တာကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုတွေလည်းထက်ဝက်ကျော်လောက်လျော့နည်းသွားမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ B2V Technology ဟာ Nissan Intelligent Mobility ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan Intelligent Mobility ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သလို ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း နောက်ဆုံးပေါ် Auto နည်းပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့ နည်းပညာမျိုးမဟုတ်ပဲ မောင်းသူတွေကိုကူညီပေးထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Nissan ရဲ့ Executive Vice President ဖြစ်သူ Daniele Schillaci ဆိုသူရဲ့ B2V Tech အပေါ်ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
AutoMyanmar ကိုလာကြည့်နေကျလူတွေဆို CES 2018 ပွဲနဲ့သိပ်ပြီးစိမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ CES ကတော့ Cosumer Electronic Show တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nissan အနေနဲ့ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် CES မှာပါဝင်တာကြောင့် အခုဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ ကားမော်ဒယ်အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်နေလောက်ပါပြီ။ Nissan သာမက တခြား automaker တွေရဲ့ CES 2018 မှာပြသသွားတဲ့နည်းပညာအသစ်တွေ၊ ကားမော်ဒယ်အသစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြာခင်ရက်အတွင်းမှာပဲဖော်ပြသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတာကြောင့် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
#Nissan‘s Brain-to-Vehicle technology is making an impact at #CES2018. Senior Innovation Researcher Lucian Gheorghe explains why. For more on Nissan’s activities at CES, visit our newsroom: https://t.co/Upj3bIM8U5 pic.twitter.com/11GTuN8f3e
— Nissan Motor (@NissanMotor) January 9, 2018